मण्डली इतिहासबाट केही पाठहरू – Word of Truth, Nepal
अन्य थुप्रै मध्ये यी केवल थोरै उदाहरणहरू मात्र हुन्। यी विश्वासीहरूले ख्रीष्टको निम्ति अडान लिए र उक्त अडानको निम्ति मूल्य चुकाए। परमेश्वरले उनीहरूलाई उनीहरूको खाँचोको समयमा बल, साहस र आनन्द समेत दिनुभयो। तपाईंको जीवन यस्तै अवस्थामा पुगेको भए के हुन्थ्यो? यस्तो विषम परिस्थितीहरूमा पनि तपाईं ख्रीष्टियन भएकोमा गर्व गर्नुहुने थियो? मण्डलीमा उपस्थित हुँदा तपाईंको जीवन नै जोखिममा पर्छ भने, के तपाईं उपस्थित हुनुहुने थियो? मानौं कम्यूनिस्टहरूले हाम्रो देशलाई आफ्नो कब्जामा लिएर ख्रीष्टलाई प्रभुको रूपमा स्वीकार गर्ने हरेक व्यक्तिलाई मारिनुपर्छ भनेर हुकुम गर्यो रे। के तपाईं चुपै लाग्नुहुन्छ (मत्ती १०:३२-३३)? के तपाईंले कहिल्यै ख्रीष्टलाई तपाईंको प्रभुको रूपमा स्वीकार गर्नुभएको छ (रोमी १०:९)? विजयी समुहको पक्षमा आउनुहोस्! ख्रीष्टले कहिल्यै हार्नुहुन्न! उहाँ सँधै विजयी हुनुहुन्छ, र मृत्युमा समेत हामीहरू विजेताहरू हौं (१ कोरिन्थी १५:५५-५८)
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-07-24 12:31:172020-07-26 12:31:54५ रङ्गभूमिमा
३ शिक्षा कि भ्रम
शिक्षा कि भ्रम
शिक्षा शब्दको अर्थ हो सिकाइने वस्तुको सङ्गालो। येशू ख्रीष्टको मण्डली मानिसहरूको शिक्षा, सिद्धान्त, राय वा विचारहरूमा बनाइएको छैन, तर यो त परमरेश्वरको शिक्षामा बनाइएको छ:
परमेश्वरको शिक्षाको एउटा चरित्र हो, सत्यता। पवित्र आत्मा (मण्डलीको शिक्षक) लाई “___________को आत्मा” भनिएको छ (यूहन्ना १६:१३) र उहाँलाई पछ्याउनेहरूलाई उहाँले “सबै ___________” डोर्याउनुहुन्छ (यूहन्ना १६:१३)। उहाँले कहिल्यै पनि झूटा कुरा सिकाउनुहुन्न र उहाँले कहिल्यै पनि कसैलाई भड्काउनुहुन्न।प्रभु येशू ख्रीष्टलाई मण्डलीको शिर भनिएको छ, र उहाँले आफू नै सत्यताको साकार रूप भएको दाबी गर्नुभयो, “बाटो, ____________ र जीवन म नै हुँ” (यूहन्ना १४:६)। उहाँले कहिल्यै पनि आफ्नो मण्डलीलाई भड्काउनुहुन्न।
येशू ख्रीष्टको मण्डलीले एउटा पुस्तकलाई पछ्याउँछ, त्यो हो बाइबल। यही एउटा पुस्तकमा मण्डलीलाई चाहिने सबै अर्ती, शिक्षा, अगुवाइ र बुद्धि हामीले पाउँदछौं। के बाइबलले कहिल्यै हामीलाई भड्काउनेछ? येशूले भन्नुभयो, “तपाईंको वचन _____________ छ” (यूहन्ना १७:१७)। बाइबललाई “___________को वचन” भनिएको छ (२ तिमोथी २:१५)।
जब सम्म विश्वासीहरू सत्यको परमेश्वर र सत्यको वचनसँग टाँसिरहन्छन्, उनीहरू सुरक्षित् रहन्छन् र भड्किनेछैनन्।
भ्रममा परेको व्यक्ति छलिएको वा धोकामा परेको हुन्छ। ऊ सत्यताबाट अन्तै डोर्याइएको छ र उसले झूटलाई अङ्गालेको छ। २ थेस्सलोनिकी २:९-१२ मा महासङ्कष्टकालको समयमा यस संसारमा जिउने मानिसहरूको बारेमा सिकिन्छ। यी मानिसहरूले सत्यतालाई स्वीकार गर्नेछन् कि इन्कार गर्नेछन् (२ थेस्सलोनिकी २:१०)? __________________ उनीहरूले के विश्वास गर्नेछन् (२ थेस्सलोनिकी २:११)? ____________________ के उनीहरू भ्रममा परेका छन् (२ थेस्सलोनिकी २:११)? ____________ उनीहरू के विश्वास गर्न इन्कार गर्छन् (२ थेस्सलोनिकी २:१२)? __________________ यी अविश्वासीहरूको तुलनामा, पावलले बताउँछन् कि साँचो विश्वासीहरू ती हुन् जसले “स_________” विश्वास गर्नेछन् (२ थेस्सलोनिकी २:१३)।
शैतान नै भ्रमको मालिक हो। प्रभु येशूले शैतानलाई यसरी व्याख्या गर्नुभयो, “त्यो शुरुदेखि नै हत्यारा थियो, अनि _____________ रहेन, किनभने त्यसमा ______________ छँदै _______। जब त्यसले __________ बोल्दछ, तब त्यो आफ्नैतर्फबाट बोल्दछ; किनकि त्यो ___________ हो र झूटको __________ हो” (यूहन्ना ८:४४)।
शैतानले मानिसहरूलाई परमेश्वरको सत्यताबाट अन्तै डोर्याउन र लैजान चाहन्छ। ऊ छल गर्न, धोकामा पार्न र भ्रममा पार्न चाहन्छ। उसले झूटो शिक्षाद्वारा परमेश्वरको शिक्षाको ठाउँ ओगट्न चाहन्छ। “साँचो (स्वस्थ) शिक्षा” को सट्टामा (१ तिमोथी १:१०; तीतस १:९; २:१), उसले मानिसहरूलाई विषालु शिक्षाहरूलाई (उनीहरूको अनन्त विनाश) विश्वास गर्न तर्फ डोर्याउन चाहन्छ। शैतानले परमेश्वरको सत्यताको विरुद्धमा अटल युद्धको फुत्कार छोडेको छ र यो युद्ध पुरुषहरू र स्त्रीहरूको हृदयहरूमा चलिरहेको छ। रोजाइ यहाँ छ:
मानिसहरूको हृदय कब्जा गर्ने यो युद्धले हामीमध्ये हरेकलाई प्रभाव पार्दछ। तपाईं कुन धरातलमा खडा हुनुहुन्छ? के तपाईं परमेश्वरको सत्यतामा खडा हुनुहुन्छ कि शैतानका भ्रमहरूमा? होशियार, नत्रता तपाईंले परमेश्वरको सत्यतालाई मानिसहरूका भावहरू, विचारहरू र धारणाहरूसँग साट्नुहोला। बहकिएर जानु निकै सजिलो छ। धोका खानु निकै सजिलो छ। सत्यतालाई हातबाट छोड्नु र शैतानका झूटहरूमा टाँसिनु एकदम सजिलो छ।
शैतानले मानिसहरूलाई परमेश्वरको सत्यताबाट र सत्यताको परमेश्वरबाट अन्तै डोर्याएर लैजान चाहन्छ। बाइबलले हामीलाई यसको बारेमा थुप्रै, थुप्रै ठाउँहरूमा चेताउनी दिँदछ।
प्रभु येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, “__________ ________________ होसियार बस” (मत्ती ७:१५)। साँचो भविष्यवक्ता परमेश्वरको अधिवक्ता वा परमेश्वरको मुख जस्तै हो। उसले परमेश्वरको वचनको घोषणा गर्दछ। झूटा भविष्यवक्तालाई तपाईं कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ? के उनीहरू बाहिरबाट हेर्दा खतरापूर्ण देखिन्छन् (मत्ती ७:१५)? ____________ के उनीहरू साँच्चै खतरापूर्ण हुन्छन्? ___________ के झुटा भविष्यवक्ताहरूलाई प्रयोग गरेर धेरैलाई धोका दिन र भ्रमित् पार्न शैतान सफल भएको छ (हेर्नुहोस् मत्ती २४:११, २४)? ___________ के पावलले तीतसलाई छलीहरूको बारेमा चेताउनी दिए (तीतस १:१०)? _________
के आज हाम्रो संसारमा धोका दिनेहरू छन्? के आज हामीले धोका र भ्रमहरूजस्ता समस्या भोगिरहेका छौं? २ तिमोथी ३ अध्यायमा पावलले तिमोथीलाई भने, “अन्तिम दिनहरूमा” (१ पद) “दुष्ट मानिसहरू र बहकाउनेहरू धोका दिँदै र ________ खाँदै _______________ ____________ हुँदै जानेछन्” (१३ पद)। उनीहरूले अरूलाई धोका दिनेछन् र आफैं पनि धोका खानेछन्। उनीहरूले अरूलाई मूर्ख बनाउनेछन् र उनीहरू आफैं पनि मूर्ख बन्नेछन्। उनीहरूले छल खुवाउनेछन् र आफैं पनि छल खानेछन्। के आज हाम्रो संसारमा यस प्रकारका मानिसहरू छन्? के उनीहरूमध्ये कसैले कुनै पुस्तकहरू पनि लेख्छन्? के उनीहरूमध्ये कसैले ख्रीष्टिय पत्रिकाहरूमा लेखहरू लेख्छन्? के उनीहरूमध्ये कसैले रेडियो वा टेलिभिजनमा पनि बोल्छन्? के उनीहरूमध्ये कोही पुल्पीटहरूमा उभिएर प्रचार गर्छन्?
साँचो शिक्षामा टाँसिरहनु भनेर विश्वासीहरूलाई बारम्बार बताइएको छ। हामीले कहिल्यै पनि सत्यतालाई छोड्नुहुँदैन। हामी कहिल्यै पनि परमेश्वरको शिक्षाबाट हट्नुहुँदैन। पावलले तिमोथीलाई “त्यहाँका कतिजनालाई अर्कै किसिमको ___________ ______________” (१ तिमोथी १:३) भनेर बताएका थिए। केवल साँचो (स्वस्थ) शिक्षा मात्र सिकाइनुपर्छ। परमेश्वरको शिक्षा मात्र घोषणा गरिनुपर्छ। हरेक अन्य शिक्षाचाहिँ झूटो र विषालु शिक्षा हो। के परमेश्वरको शिक्षाबाट अन्तै फर्केका केही मानिसहरूमा बारेमा पावल जानकार थिए (१ तिमोथी १:६)? _______________________ सिकाइनुपर्ने एउटै मात्र वचनहरू वा शिक्षा के हो (१ तिमोथी ६:३)? _____________________________________________________________
परमेश्वरको सत्यता शिक्षकबाट विद्यार्थीलाई र प्रचारकबाट श्रोतालाई सुम्पिइनुपर्छ। परमेश्वरको सत्यतामा केही पनि थप्नुहुँदैन र केही पनि हटाउनुहुँदैन। पूरै बाइबल सिकाइनुपर्छ—त्यो भन्दा ज्यादा पनि होइन र कम पनि होइन। पूरै बाइबलबाट थोरै भाग हटाएर सिकाइयो भने कस्ता समस्याहरू आउन सक्छन्? पूरै बाइबलमा थोरै भाग थपेर सिकाइयो भने कस्ता समस्याहरू आउन सक्छन्? अर्कै किसिमको कुनै पनि कुरा सिकाइनुहुँदैन। उही सत्यता (परमेश्वरको सत्यता) र उही पुस्तक (परमेश्वरको पुस्तक, बाइबल) लाई होशियारीपूर्वक सिकाइनुपर्छ र अरूलाई सुम्पिइनुपर्छ (तुलना गर्नुहोस् २ तिमोथी २:२)।
धोकेबाज शैतान आफ्नो काममा व्यस्त छ!
धेरै समय अगाडि शैतानले बगैंचामा कसलाई छल गर्‍यो (२ कोरिन्थी ११:३)? ______________ त्यस समय यता मानिसहरूलाई छल गर्न ऊ व्यस्त छ। ऊ निकै सफल पनि भएको छ! उसका खेतालाहरू थुप्रै छन् (२ कोरिन्थी ११:१३)। उसले त्रुटिलाई अति मनोहर दखा पर्ने र अन्धकारलाई अति ज्योतिर्मय देखा पर्ने तुल्याउँछ (२ कोरिन्थी ११:१४)। शैतानका सेवकहरू अति धर्मी देखा पर्छन् (२ कोरिन्थी ११:१५)। कतिको नामको अगाडि त रेभरेन्ट (सम्माननिय) पनि लगाइएको हुन्छ र उनीहरू हरेक शनिबार पुल्पीटमा उभिन्छन् र मानिसहरूलाई प्रचार गर्छन्। उनीहरूको समस्या एउटै मात्र छ। तिनीहरूले सत्यता प्रचार गर्दैनन्!
१ तिमोथी ४:१ मा वर्णन गरिएझैं शैतानको कार्यलाई होशियारपूर्वक ध्यान दिनुहोस्:
शैतानले मानिसहरूको सामु आफ्नो शिक्षालाई आकर्षक देखाउँछ र धेरैजना उसको झूटमा फस्छन्। प्याकेटमा राखेर बेचिएका खाने कुराहरू आकर्षक त देखिएलान् र स्वादमा मीठो पनि होला तर यदि मानिसहरूले अरू केही नखाएर चकलेट र कुरकुरे मात्र खाने हो भने धेरै मानिसहरूको स्वास्थ्य बिग्रन पुग्छ। शैतानको शिक्षा आकर्षक होला तर ती विषालु हुन्छन्। साँचो स्वस्थ शिक्षा केवल परमेश्वरको वचनमा मात्र पाइन्छ।
कसरी शैतानले मानिसहरूलाई परमेश्वरको सत्यताबाट अन्तै बहकाउन सफल भयो भन्ने कुरा गलाती १ अध्यायबाट जान्न सकिन्छ:
नयाँ नियमको पुस्तकहरूमा परमेश्वरले मानिसहरूलाई उहाँको सत्यताबाट हटेर शैतानको धोकालाई विश्वास गर्न सक्ने खतराहरूको बारेमा चेताउनी दिनुभएको छ। निम्न जोडा मिलाउने काम गर्दा तपाईंले ती मध्ये केही चेताउनीहरूलाई देख्नुहुनेछ:
१.__________ तपाईंलाई बहकाउन खोज्नेहरू हुनेछन्। क. कलस्सी २:४
२.__________ तपाईंलाई धोका दिन चाहनेहरू हुनेछन्। ख. १ यूहन्ना २:२६
३.__________ परमेश्वरको वचनलाई बिगार्नेहरू हुनेछन्। ग. २ पत्रुस ३:१६
४.__________ आफ्नै उद्देश्यको निम्ति पवित्रशास्त्रलाई टेंढामेढा पार्नेहरू हुनेछन्। घ. हिब्रू १३:९
५.__________ अनेकौं अनौठा शिक्षाहरूद्वारा यता र उता पार्न खोज्नेहरू हुनेछन्। ङ. २ कोरिन्थी २:१७
झूटा शिक्षाले स्थानीय मण्डलीको विनाश गर्न सक्छ भनी पावल जान्दथे, र त्यसैकारण तिनले यसको बारेमा मानिसहरूलाई दिनरात चेताउनी दिरहे (प्रेरित २०:३१)। मण्डलीलाई सत्य र स्वस्थ शिक्षा खुवाइनुपर्छ (प्रेरित २०:२८)। मण्डलीलाई सम्पूर्ण बाइबल खुवाइनुपर्छ (प्रेरित २०:२७)। मण्डलीलाई बाहिर र भित्र दुवै तर्फबाट आउने खतराहरूको निम्ति जागो राख्नुपर्छ।
रोमी १६:१७-१८ मा पनि पावलले झूटा शिक्षकहरूको वयान गरेका छन्। के यी मानिसहरूले परमेश्वरबाट नै पाएका साँचो शिक्षा सिकाउँछन्? ______________ उनीहरूको प्रचार सुन्दा, के उनीहरूका शब्दहरू असल सुनिन्छन् र के तिनीहरूले केही उत्कृष्ट बुँदाहरू बनाएका देखिन्छन् (१८ पद)? ______________ के उनीहरूले साँच्चै ख्रीष्टको सेवा गर्छन्? _________ के हामीहरूले उनीहरूलाई पछ्याउनु हुन्छ (१७ पद)?
२ यूहन्नाको सानो पुस्तक पढ्नुहोस्। के यो पुस्तकमा झूटा शिक्षकहरूको बारेमा कुनै कुरा भेट्टाउन सक्नुहुन्छ? यी मानिसहरूले कस्तो खालको शिक्षा ल्याउँछन्? के यी मानिसहरूलाई कुनै पनि प्रकारले सहायता गर्नु ठीक हुन्छ? के मानिसहरू आफ्नो साथमा झूटो शिक्षा लिएर तपाईंको घरमा आउने गर्छन्? के झूटा शिक्षा र झूटा धर्महरूका मानिसहरूले तपाईंको घरको ढोका ढक्‍ढक्याउँछन्? झूटो शिक्षाको बारेमा प्रभु येशू ख्रीष्टले के सोच्नुहुन्छ (प्रकाश २:१५)? ______________________________________ जसरी शरीरको लागि आर्सेनिक विषालु हुन्छ, त्यसरी नै प्राणको निम्ति झूटा शिक्षा पनि विषालु हुन्छ। यो खतरापूर्ण हुन्छ!
पत्रुसले झूटा शिक्षकहरूको बारेमा के चेतावनी दिए (२ पत्रुस २:१)? के यी झूटा शिक्षकहरूलाई मानिसहरूले पछ्याउनेछन् भनी पत्रुसले सोच्दथे (२ पत्रुस २:२)? _________________________ मानिसहरूले परमेश्वरका वचनहरूको ठाउँमा मानवीय शिक्षालाई ठाउँ दिए भने शैतान सफल हुन्छ (हेर्नुहोस् मत्ती १५:९)।
मानिसहरू किन झूटा शिक्षामा फस्छन्?
१. किनभने उनीहरूको चाहना यही नै हो!
पावलले तिमोथीलाई के प्रचार गर्नु भने (२ तिमोथी ४:२)? _____________________ उनी बाइबल बाहेक अरू केही पनि होइन तर पूरै बाइबल प्रचार गर्न चाहन्थे। किन थुप्रै मानिसहरू परमेश्वरको सत्यता (खाँटी शिक्षा) सुन्न चाहँदैनन् भनी २ तिमोथी ४:३ बाट हामी जान्न सक्छौं। शिक्षकहरूले आफूलाई सुन्नमा असल र राम्रो लाग्ने खालको प्रचार गरेको उनीहरू चाहन्छन्। उनीहरूले आफूलाई चोट पुर्याउने वा आफूलाई बाधा दिने कुनै पनि कुरा सुन्न चाहँदैनन्। कहिलेकाहीँ सत्यताले चोट पुर्याउँछ (कहिलेकाहीँ औषधी पनि निकै तितो लागेको जस्तै), तर चोट पुर्याए पनि वा नपुर्याए पनि हामीले सत्यता सुन्नु पर्छ। हामीलाई यो सँधै मन नपर्ला, तर हामीलाई सँधै यो चाहिन्छ। परमेश्वरको सत्यता हरेक पल्ट मानिसले खोजेको जस्तो नहोला, तर हरेक पल्ट उनीहरूलाई चाहिएको यही हो। परमेश्वरको वचनमा पाइने कुनै यस्तो शिक्षाको बारेमा सोच्न सक्नुहुन्छ, जुनचाहिँ निकै कठीन (निल्न एकदम गाह्रो) तर अति सत्य र आवश्यक हुन्छ?
२. किनभने मानिसहरू ख्रीष्टमा हुर्कन असक्षम हुन्छन्!
एफेसी ४:१४ लाई बिचार गर्नुहोस्। यी मानिसहरू झुटा शिक्षाको हरेक बतासद्वारा यता उता हुत्याइन्छन्। उनीहरू स्थीर छैनन्। यी बालकहरू (१४ पद) ब_______ पर्छ (१५ पद)! सत्यता नजान्नेहरूले आफैंलाई त्रुटीपूर्ण कुराहरूका निम्ति खुल्ला राखिरहेका छन्। हामी जति प्रभुमा बढ्छौं र परमेश्वरको सत्यता सिक्छौं, त्यती नै धोकामा पर्न र त्रुटीमा खस्नबाट कम जोखिममा हुन्छौं। तपाईंले प्रभुमा बढ्न र परमेश्वरका सत्यताहरू सिक्नका निम्ति सहायता गर्न दिन-व-दिन के गर्दैहुनुहुन्छ?
पहिलो शताब्दीमा समेत मानिसहरू पतन भइरहेका थिए।
मण्डलीको सुरुका दिनहरूमा समेत मानिसहरू भड्काइएका र झूटा शिक्षाभित्र पतन भइरहेका थिए। नयाँ नियमले हामीलाई यसको बारेमा धेरै उदाहरणहरू दिएको छ; ती मध्ये केही यस्ता छन्:
केही कोरिन्थीहरूले पक्रिरहेको झूटो शिक्षा के थियो (१ कोरिन्थी १५:१२)?
हुमेनियस र फिलटेसले कुन झूटो शिक्षा सिकाइरहेका थिए (२ तिमोथी २:१७-१८)?
गलातीहरू परमेश्वरको अनुग्रहको सुसमाचारबाट फर्किएका थिए र अर्कै सुसमाचार प्रचार गरिरहेका थिए (गलाती १ अध्याय)।
कलस्सीहरू झूटा शिक्षाहरूद्वारा प्रभावित भएका थिए। उनीहरूले स्वर्गदूतहरूको पूजा गर्नुपर्छ भनी उनीहरूलाई बताइएको थियो (कलस्सी २:१८)। उनीहरूले मानिसहरूका आज्ञाहरू र शिक्षाहरूलाई पछ्याइरहेका थिए (कलस्सी २:२२)।
प्रेरित यूहन्नाले ख्रीष्ट ___________ आउनुभएको होइन भनी सिकाउनेहरूको बारेमा चेताउनी दिए (१ यूहन्ना ४:३)। उनीहरूले ख्रीष्टको वास्तविक शरीर थिएन र उहाँ वास्तविक मानिस हुनुहुन्न थियो भनी सिकाए।
१ तिमोथी ४:१-३ मा दुई गलत शिक्षा सिकाउनेहरूको बारेमा सिक्दछौं: १) कुनै-कुनै मानिसहरूले विवाह गर्नुहुँदैन २) कुनै-कुनै खाने कुराहरू खानु हुँदैन। यी दुई शिक्षाहरूलाई पछ्याउने कुनै धर्महरूको बारेमा सोच्न सक्नुहुन्छ?
२ थेस्सलोनिकी २:२ मा ख्रीष्टको आगमन र प्रभुको दिनको विषयमा झूटा शिक्षा भएको एउटा पत्र प्राप्त भएको थियो भनी हामी सिक्दछौं।
यहूदा ४ मा केही यस्ता झूटा शिक्षकहरूको बारेमा सिक्न सक्छौं जोहरूले यसो भनीरहेका थिए, “परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा मुक्ति पाएको हुनाले हामीले आफूलाई मन पर्ने जस्तो सुकै तरिकाले जिए पनि हुन्छ।” के आज कुनै नामधारी “ख्रीष्टियनहरू” ले यो शिक्षालाई पक्रेको छ?
सुरुको मण्डली इतिहास
झूटा शिक्षकहरूलाई भित्र पस्न र मण्डलीलाई बिगार्न धेरै समय लागेको थिएन भनी सुरुको मण्डली इतिहासको अध्ययन गर्दा हामीले छिट्टै बुझ्न सक्छौं। भित्र पसेका केही झूटा शिक्षाहरू मध्ये थोरै यहाँ छन्:
मण्डली इतिहासको सुरुतिर त्यहाँ केही यस्ता मानिसहरू थिए जोहरूले पानीको बप्तिस्माले एउटा मानिसलाई बचाउँदछ भनी सिकाउँथे। यो झूटा शिक्षालाई ब्याप्टिज्मल रिजेनेरेशन (बप्तिस्माद्वारा नयाँ जन्म) भनिन्छ र आज पनि थुप्रै मानिसहरूले यो सिकाउने गर्छन्।
मण्डली इतिहासको सुरुतिर त्यहाँ केही यस्ता मानिसहरू थिए जोहरूले येशू ख्रीष्ट परमेश्वर हुनुहुन्न भनेर सिकाउँथे। उहाँ केवल एउटा सृष्टिको थोक, वा परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको महान् स्वर्गदूत मात्र हुनुहुन्छ भनी उनीहरूले भन्थे। यो झूटो शिक्षा आफैंलाई यहोवा विट्नेस् भनी चिनाउने समूहद्वारा प्रचार भइरहेको छ।
हरेक स्थानीय मण्डलीमा केही मानिसहरू अगुवाहरूको रूपमा हुन्छन् र उक्त अगुवाहरूलाई डिकनहरू र अध्यक्षहरु (एल्डरहरू) भनिन्छ भनी बाइबलले सिकाउँदछ। हेर्नुहोस् फिलिप्पी १:१। अगुवापनको यो शिक्षालाई मण्डली इतिहासको सुरुका केही मानिसहरूले बङ्ग्याए र दुरुपयोग गरे। “अध्यक्ष” क्रमिक रूपमा झन् झन् शक्तिशाली हुँदै गए र अन्य थुप्रै मण्डलीहरूमाथि अगुवा समेत भए:
समयको क्रममा सबै मण्डलीहरूमाथि एउटै मानिसलाई अधिकार दिइयो, र उसलाई पछि पोप भनी नामाकरण गरियो। के परमेश्वरले योजना गर्नुभएको यस्तै हो? सबै मण्डलीहरूमाथि एउटै शिर को हुनुहुन्छ (एफेसी १:२२-२३)? ___________________________
आफैंलाई झूटा शिक्षाबाट जोगाउन तपाईंको स्थानीय मण्डलीले के गरिरहेको छ? आफैंलाई जोगाउने तपाईंले के गर्दै हुनुहुन्छ? धोकामा पर्न, भ्रममा पर्न र परमेश्वरको सत्यताबाट भड्काइनबाट बाँच्नलाई तपाईं के गर्दै हुनुहुन्छ? के सत्यको आत्मा तपाईंको हृदयभित्र जिउनुहुन्छ? के तपाईंले उहाँलाई आफ्नो शिक्षक हुन दिइरहनुभएको छ? कसरी? के तपाईं हरेक दिन सत्यको वचन खोल्नुहुन्छ? तपाईंको निम्ति बाइबल कत्तिको महत्त्वपूर्ण छ? गएको मङ्गलबार आफ्नो बाइबलसित केही गर्नुभयो? गएको बिहीबार? गएको शुक्रबार?
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-04-20 16:44:372020-08-06 11:28:10३ शिक्षा कि भ्रम
सीजर कि ख्रीष्ट?
के ख्रीष्ट साँच्चै प्रभु हुनुहुन्छ? के उहाँ साँच्चै मेरो प्रभु हुनुहुन्छ? हुनुहुन्छ भने, यसको अर्थ के हो? के मेरो प्रभुले मबाट केही कुराको माग गर्नुहुन्छ? हरेक विश्वासीले सोच्नुपर्ने र सम्झना गर्नुपर्ने केही कुराहरू यस प्रकार छन्:
“अनि तिमीहरू किन मलाई ‘हे प्रभु, हे प्रभु’ भन्दछौ,
र मैले भनेका कुराहरूचाहिँ पालन गर्दैनौ?”
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-02-05 20:25:442020-06-13 09:51:33२-सीजर कि ख्रीष्ट?